Iifayibha zeglasi ze-roller ze-Blinds zelaphu zabavelisi kunye nabaxhasi - China i-fiberglass roller ye-Blinds Fabric Factory
Roller kabini Blinds Fibreglass uMnyama Ilaphu
Indwangu ye-fiberglass emnyama yenziwe nge-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Ayithengisi amasuntswana aqinileyo emoyeni kwaye ayihambelani nothuli, elinokuthi licuthe ngokufanelekileyo inani lothuli. Ukongeza Yiminerali yendalo kwaye ayiboneleli ngendawo yokukhula kwebhaktiriya. Iibhaktheriya azikwazi ukuvelisa kwaye iingubo aziyi kubumba. Isetyenziswa ngokubanzi kubomi bethu. Umzekelo, ulwakhiwo lukawonkewonke (ijimnasium, iholo enkulu yemidlalo, isikhululo seenqwelomoya, iziko lomboniso), iofisi, ihotele (irestyu, igumbi leendwendwe, indawo yokuzivocavoca, igumbi lokuhlangana) kunye nekhaya (igumbi lokulala, igumbi lokufundela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, igumbi elangeni , ibhalkhoni).
Obona ububanzi buphezulu sibenzayo bungu-3m. Kwaye ubukhulu bumalunga ne-0.38mm. Ubude belaphu le-fiberglass elimnyama li-30mper roll. Uluhlu ngalunye lupakishwe kwityhubhu eyomeleleyo yephepha.
Eco-friendly Antibacterial Blackout Fibreglass Ilaphu For mqengqeleki Blinds
Ilaphu elimnyama le-fiberglass lenziwe nge-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Ikhululekile kwizinyithi ezinobunzima kunye nezinto eziyingozi, ikhuselekile kwaye inobuhlobo, akukho livumba lingaqhelekanga, akukho monakalo emzimbeni womntu, uzinzo oluphezulu kakhulu, ezintle kwaye ezintle, kunye nokuthelekiswa kombala nako kufanelekile ekuhombiseni kwale mihla. Isetyenziswa ngokubanzi kwimeko-bume eyahlukeneyo, enjengeofisi, ihotele, iivenkile zokutyela kunye nekhaya.
Ubude belaphu elimnyama le-fiberglass li-30m kuluhlu ngalunye. Uluhlu ngalunye lupakishwe kwityhubhu eyomeleleyo yephepha. Uvavanyo lomgangatho kufuneka lwenziwe ngaphambi kokuhambisa.
I-Eco-efanelekileyo yeFiberglass Fabric eyi-100% yokuCima koMnyama ekhaya
Ilaphu elimnyama le-fiberglass lenziwe nge-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Iyamelana nokubola kwemichiza eyahlukeneyo enjengeasidi kunye nealkali; ngokumelana nokuguga okukhanyayo kunye nokumelana nemozulu; non-hygroscopic, hydrophobic kunye namanzi; amandla eqine; ukungabi nothuli, anti-ukutsha, anti-static, anti-ultraviolet; ukungalingani kokunyuka kwe-thermal kunye nokuncipha kuncinci, ukungena komoya okuhle, ukukhanya kombala okuhle, uzinzo oluqinisekileyo, ukubonakala okuhle, akukho lula ukungcoliswa, kulula ukucoceka, akukho deformation emva kokuhlamba, ukuhlala ixesha elide. Ubude belaphu elimnyama le-fiberglass yi-30mper roll. Uluhlu ngalunye lupakishwe kwityhubhu eyomeleleyo yephepha.
Flame Retardant Fibreglass Blackout Ilaphu 2m Ububanzi
Indwangu ye-fiberglass emnyama yenziwe nge-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Inepropathi yokudodobalisa idangatye engafunyanwa kwamanye amalaphu. Ilaphu le-fiberglass lokwenyani alinakukhubazeka okanye ikhabhoni ngenxa yokuba amathambo angaphakathi elaphu ayingubo yeglasi emva kokutsha. Izinto zelaphu ngokwazo zimisela ukuba azinakulungelelaniswa kwaye zigcina isicaba ixesha elide. Akukho warpage, ulwandiso kunye nokucutha <0.5%. Ngaphezu, akukho mfuneko yokuqinisa, ukumelana neenyembezi zendalo, kunye nokumelana okubalulekileyo komoya kunye neempawu zoomatshini ezinokumelana nokusetyenziswa rhoqo.
Umgangatho ophezulu we-Anti-UV PVC Curtain fiberglass emnyama
Indwangu ye-fiberglass emnyama yenziwe nge-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Ayithengisi amasuntswana aqinileyo emoyeni kwaye ayihambelani nothuli, elinokuthi licuthe ngokufanelekileyo inani lothuli. Ukongeza Yiminerali yendalo kwaye ayiboneleli ngendawo yokukhula kwebhaktiriya. Iibhaktheriya azikwazi ukuvelisa kwaye iingubo aziyi kubumba. Isetyenziselwa indawo ezahlukeneyo, ezinjengeofisi, ihotele, iivenkile zokutyela.
Obona bubanzi buphezulu sibenzayo bungu-3m ​​kwaye ubukhulu bumalunga ne-0.38mm. Ubude belaphu le-fiberglass elimnyama li-30mper roll. Uluhlu ngalunye lupakishwe kwityhubhu eyomeleleyo yephepha.
Eyona Window idume ngoku Blinds Fibreglass Blackout Ilaphu
Indwangu ye-fiberglass emnyama yenziwe nge-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Kwimeko yokukhanya kwelanga yexesha elide, umbala wokukhawuleza kwelaphu kufuneka ufike kumgangatho othile wokuthintela ilaphu lingapheli. Kwimveliso enexinzelelo olucacileyo okanye iimfuno zoqine, amandla okuqina elaphu kufuneka athathelwe ingqalelo. Umzekelo, iimfama ze-roller eziphezulu kwizakhiwo zikawonkewonke kunye namakhethini esilingi anamandla aphezulu eqine kufuneka asebenzise ilaphu le-fiberglass.
Ngaphantsi kwezi meko, i-fiberglass emnyama emnyama yelaphu lukhetho olufanelekileyo.
Umgangatho ophezulu we-PVC Camera Fibreglass Blackout Ilaphu yeOfisi
Ilaphu le-fiberglass elimnyama lenziwe nge-fiberglass kunye ne-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Ikhululekile kwizinyithi ezinobunzima kunye nezinto eziyingozi, ikhuselekile kwaye inobuhlobo, akukho livumba lingaqhelekanga, akukho monakalo emzimbeni womntu, uzinzo oluphezulu kakhulu, ezintle kwaye ezintle, kunye nokuthelekiswa kombala nako kufanelekile ekuhombiseni kwale mihla.
Ilaphu le-fiberglass elimnyama lenziwe ngezimbiwa zendalo (i-quartz, isanti, isoda, ikalika). Isetyenziswa ngokubanzi kwimeko-bume eyahlukeneyo, enjengeofisi, ihotele, iivenkile zokutyela kunye nekhaya. Ukwakheka kwe-fiberglass amalaphu amnyama yi-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC, iileya ezintathu ze-PVC kunye nocingo lwe-fiberglass enye. Obona bubanzi buphezulu sibenzayo bungu-3m ​​kwaye ubukhulu bumalunga ne-0.38mm. Ubude belaphu le-fiberglass elimnyama li-30mper roll.
Ukukhusela i-UV Ukukhusela i-fiberglass yengubo ye-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC
Ifayibha yeglasi yinto engaqhelekanga engesosinyithi enentsebenzo egqwesileyo kunye nenxalenye ebalulekileyo yelaphu le-fiberglass yelanga. Izithako ziyi-silica, i-alumina, i-calcium oxide, i-boron oxide, i-magnesium oxide, i-sodium oxide kunye nezinto ezinjalo.
Ilaphu elimnyama le-fiberglass lenziwe ngezimbiwa zendalo (i-quartz, isanti, isoda, ikalika). Isetyenziswa ngokubanzi kwimeko-bume eyahlukeneyo, enjengeofisi, ihotele, iivenkile zokutyela kunye nekhaya. Ubude belaphu elimnyama le-fiberglass yi-30mper roll. Uluhlu ngalunye lupakishwe kwityhubhu eyomeleleyo yephepha. Obona bubanzi buphezulu sibenzayo bungu-3m ​​kwaye ubukhulu bumalunga ne-0.38mm.
Nkqo Blinds Fibreglass Blackout Ilaphu Ekhaya
Ilaphu le-fiberglass elimnyama lenziwe nge-fiberglass kunye ne-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Ayithengisi amasuntswana aqinileyo emoyeni kwaye ayihambelani nothuli, elinokuthi licuthe ngokufanelekileyo inani lothuli. Ikwanokuthintela ngokufanelekileyo ukukhanya kwelanga kunye nemitha ye-ultraviolet, eyinzuzo empilweni. Kufanelekile kwiihotele, izindlu zokuhlala, iindawo zokuhlala eziphezulu, iindawo zolonwabo, njl.
Ubude belaphu le-fiberglass elimnyama li-30mper roll. Uluhlu ngalunye lupakishwe kwityhubhu eyomeleleyo yephepha. Obona ububanzi buphezulu sibenzayo bungu-3m. Kwaye ubukhulu bumalunga ne-0.38mm.
Manzi mqengqeleki engaphandle Blinds Fibreglass Blackout Ilaphu
Indwangu ye-fiberglass emnyama yenziwe nge-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Isetyenziswa ngokubanzi kubomi bethu. Umzekelo, ulwakhiwo lukawonkewonke (ijimnasium, iholo enkulu yemidlalo, isikhululo seenqwelomoya, iziko lomboniso), iofisi, ihotele (irestyu, igumbi leendwendwe, indawo yokuzivocavoca, igumbi lokuhlangana) kunye nekhaya (igumbi lokulala, igumbi lokufundela, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, ikhitshi, igumbi elangeni , ibhalkhoni). Iqulethwe ngamanqanaba amathathu ePV kunye no-1 umaleko we-fiberglass.
Amanzi eFiberglass Blackout Ilaphu yeOfisi
Indwangu ye-fiberglass emnyama yenziwe nge-40% ye-fiberglass kunye ne-60% ye-PVC ngenkqubo ekhethekileyo. Inepropathi yokudodobalisa idangatye engafunyanwa kwamanye amalaphu. Ilaphu le-fiberglass lokwenyani alinakukhubazeka okanye ikhabhoni ngenxa yokuba amathambo angaphakathi elaphu ayingubo yeglasi emva kokutsha. Isetyenziswa ngokubanzi kubomi bethu. Umzekelo, izakhiwo zikawonke-wonke, isakhiwo seeofisi, ihotele kunye nekhaya.
Ilaphu le-fiberglass emnyama licwecwe ngemaleko emithathu ye-PVC kunye nocingo lwe-fiberglass eyi-1. Kwaye ubukhulu bumalunga ne-0.38mm. Kukho iintlobo ezingaphezu kwe-100 zemibala efumanekayo kubenzi bemfama. Ubude be-fiberglass yelaphu elimnyama li-30mper roll. Uluhlu ngalunye lupakishwe kwityhubhu eyomeleleyo yephepha.
I-Fiberglass Roller engamanzi engamanzi engama-3m ububanzi